Uhlalutyo lwenzuzo yefestile yokuhlamba
Ngethuba lokufika kwebusika, iindawo zokuhlamba iimpahla ezininzi zaqala ukuxakeka, zisebenze ixesha elingaphezu kweentsuku zonke ukugqiba ekuhlambulukeni kwelineni zelithengi, zisoloko zikwazi ukucofa ngeli xesha zifuna ukutshala imali yokuhlamba iimfestile zokutsala izityalo-mali ziqhagamshelane ne-PuLanDe yokuhlamba impahla yokuvelisa. , LTD. , ezinye iinkcukacha malunga nesityalo sokuhlamba iimpahla zokuhlamba iimpahla, ezizona zihloko ezidumileyo ekuncedeni indlela yokuhlamba iimpahla zokuhlamba impahla, namhlanje namhlanje guangzhou ENEJEAN ukuhlamba impahla yokuvelisa imveliso. , LTD isekelwe ekuhlalutweni kwedatha olulula kumntu wonke.
Enye, ithemba lokuhlamba isityalo
Ngokwenziwe uphando olugunyazisiweyo kwisixeko esinabasebenzi abangaphezu kwezigidi ezi-1 kwiplastiki nganye yokuhlamba impahla, iingubo ezili-100, ngokuqhelekileyo, isixeko siya kuthatha ubuncinane ubuncinane ngaphezu kwe-50 igumbi lokuhlamba, isityalo sokuhlamba iimpahla ukuhlangabezana neemfuno zesixeko, ngelo xesha ukuhlamba iimpahla zokuhlamba iimveliso zenkampani yeChina yokunyuka kwenyuka kwinqanaba leminyaka eli-19. 5% ngonyaka kwaye kukho malunga ne-9.95 yezigidigidi ze-yuan ixabiso lokuphuma kweRMB.
Icandelo lokuhlamba impahla yokuhlanjululwa kwempahla yile mboni yoshishino lokuphumla kwelanga, ayiyi kuphinda iwele, i-domestic isithuba sokuphuhliswa ngokukhawuleza, imarike yoluhlu olubanzi lwabathengi yokuhlamba impahla yeevenkile. inendawo enkulu yokuphuhliswa, ngoko ke ngoku ukubonisa ilizwe lethu iindawo ezithile zokuhlamba iimpahla zokuhlamba iimveliso kubanzi abaninzi abanotyalo-mali, kodwa i-ENEJEAN yokuhlamba imveliso yokuvelisa imveliso. , LTD. Lapha kufuneka ukuba ukhumbuze utyalo-mali kufuneka ulungele ukulungiselela ukuhlamba iimpahla zokuhlamba iimpahla kunye nokuqokelela idatha edibeneyo, kuba ukwazi oko kuphela, kunokuvumela ukuba umfaki wakho wohlamba wokuhlamba uqaliswe xa uphumelela kumgca wokuqala.
Okwesibini, ukuhlaziywa kweengeniso zokuhlamba iimveliso
Ukuhlamba iimpahla zokuhlamba iimali ikakhulukazi ekukhethweni nasekuthengeni impahla yokuhlamba impahla yefowuni, indawo, irente, iindleko zabasebenzi kunye neendleko zokugcina ezi zinto, iimpawu ezahlukeneyo zokuhlamba iimpahla zokuhlamba iimpahla zineengxaki ezinkulu, inzala ifanayo, ngokwezibalo ezingaphelelanga imihla ngemihla yokuhlamba iingubo zelinen ye-2 ~ 20 i-RMB yuan phakathi, izinto ezibonakalayo zibiza i-RMB kuphela. 1 okanye kunjalo, xa kukho indleko rhoqo, nganye inkcitho yokuhlamba eyongezelelweyo, malunga nokuchitha imali encinci kuphela ukuhlamba iindleko ezongeziweyo zezinto ezibonakalayo, kwaye ingeniso yenyuka 1-15 i-yu yu yuan, ngoko ke imali yokuhlamba impahla yefestile iphezulu njengama-70%, inzuzo yakho kukudala inzuzo engenakulinganiswa namanye amashishini enkonzo, ngoko ke ixesha elide njengoko ulawulo olulandelelweyo lokuphucula ukuhlanjululwa kwemveliso yokuhlamba iimpahla kwakulungile.
Inqaku lokugqibela: Zingaphi ixabiso loomatshini o...
Inqaku elilandelayo: Mhlawumbi kufuneka ukuba uninz...